Uluvavanya njani uqhagamshelo lwebhendi ebanzi ye-Intanethi
Ukuqhagamshela kwi-Intanethi kuthathwa njengento engenamsebenzi. Kude kubekho into engahambi kakuhle. Sukoyika. Uvavanyo kunye nengxaki. Jonga ezi zinto xa unengxaki yokufumana okanye ukuhlala kwi-Intanethi:
Umthombo wamandla: Qinisekisa ukuba unamandla- xa umbane ucima, i-Intanethi iyacima.
Eminye imiqondiso: Ukuba usebenzisa intambo yokufikelela kwi-Intanethi, umzekelo, jonga intambo yeTV. Ukuba isiginali yeTV iphumile, ingxaki yakho ikwe-cable system. Kuqhagamshelo lweDSL, jonga umgca wefowuni: Akukho lizwi lokufowuna lithetha ukuba akukho Internet.
Izibane zemodem: Iimodem ze-Broadband zibonisa izibane ezenza okungaphezulu kunokujongeka zinomtsalane. Qinisekisa ukuba izibane zemodem yakho zikhanyisiwe, zinombala ofanelekileyo, kwaye, ukuba kufanelekile, ziyaqhwanyaza.
ipilisi emhlophe t 259
Nazi izinto ezinokuthethwa zizibane kunye nendlela abanokuthi bajonge ngayo ukujonga unxibelelwano lwe-Intanethi. Ayizizo zonke iimodem ezinezibane ezahlukeneyo ezidwelisiweyo.
Oko Kwenziwa Yimodem Xa Isibane Sithile
Amandla Ukufumana amandla kunye nokusebenza ngesiqhelo.
Kwi-Intanethi Ukwazisa ukuba idityaniswe nenkonzo, kodwa
Umqondiso Ukuthumela ulwazi, kunye nokufumana ukusuka, kwi
Thumela Ukuthumela ulwazi kwi-Intanethi.
Yamkela Ukufumana ulwazi kwi-Intanethi.
Umsebenzi (Ukudanyaza) Ukuthumela unxibelelwano kuyo, okanye ukuyifumana ivela, kwi
ikhompyutha okanye inethiwekhi yendawo.
Ubume Ukusebenza okanye ukuba nemicimbi. Isibane sinokutshintsha umbala, kuxhomekeke
kwimeko yemodem okanye unxibelelwano.
Okokuqala, jonga ukukhanya kwamandla. Ngaba imodem ivuliwe? Jonga uqhagamshelo lwamandla ukusuka kwimodem ukuya kwisokethi eludongeni. Akukho mbane kuthetha ukuba akukho Internet.
Okwesibini, jonga uphawu lwe modem okanye ufumane ukukhanya. Xa ukukhanya kucinyiwe, kucwayiza, okanye umbala obomvu okanye orenji, uqhagamshelo lwe-Intanethi lunengxaki. Ngokukodwa, umqondiso awusasazwa. Ungatsalela umnxeba i-ISP yakho ngoncedo okanye ulinde imizuzwana embalwa ukuze ubone ukuba ingxaki iyazicoca na.
Khubaza ukulinda okanye ukutshintshela emuva. Ezinye iimodem zibonisa iswitshi yovavanyo, enokuthi ibhalwe njengelindisiweyo okanye iLoopback. Qinisekisa ukuba iswitshi ikwindawo efanelekileyo ukuba imodem inxibelelane.
Jonga unxibelelwano ngokwasemzimbeni. Ngaba imodem iqhagamshelwe kumzila? Ngaba i-router ixhunyiwe kwaye isebenza? Ngaba unxibelelwano lwenethiwekhi luyasebenza? Ngaba ikhomputha yakho inokufikelela kwezinye iikhompyuter kwinethiwekhi yendawo? Unga ping umzila?
I-pepto bismol kunye ne-antibiotics
Qala kabusha imodem. Ukuqala kwakhona imodem yeyona nto iqhelekileyo yokufumana uqhagamshelo lwebhendi ebanzi kunye nokubaleka.
Linda imizuzwana engama-30.
Xhuma imodem kwakhona.
Ukuba eli qhinga alisebenzi, kufuneka uqalise kwakhona imodem kunye ne-router. Landela la manyathelo alandelayo:
Ngaba yi-albuterol steroid
Xhuma kwi-router kwakhona.
Ukuba i-Intanethi ayinakufikeleleka, zama ukuqala kwakhona ikhompyuter . Ingxaki inokuba sekhompyutheni yakho, kwaye iqhinga eliqhelekileyo lokulungisa malunga nayiphi na ingxaki yekhompyuter kukuqalisa kwakhona iPC.
Ukuba ingxaki iyaqhubeka, imodem okanye umzila unokufuna ukubuyiselwa.
Ukufikelela kwe-intanethi kwi-modem yeselula (eyaziwa njenge ukulungelelanisa ) ayipheli xa umbane ucima. Ukuba ilaptop yakho ixhotyisiwe, usenokusebenzisa i-Intanethi ngexesha lokucima umbane.
I-ISP yakho (intambo okanye inkampani yefowuni) inokuvavanya umgca ukuya kuthi ga kwimodem yakho. Oko kuya kugqiba ekubeni ingxaki yinethiwekhi ye-ISP okanye yeyakho.
Ngaba i-amoxicillin ibangela ukuqhina
Ibhendi ebanzi Ligama eliqhelekileyo elichaza intambo, i-DSL, isathelayithi kunye nolunye uqhagamshelo olukhawulezayo kwi-Intanethi.
I-54 760 (iPrednisone 20 mg)
Uyenza njani iGrafu iNdawo eshiyekileyo kwi-TI-84 Plus
Indlela yokuchonga iipatheni ngokugqibeleleyo kwitshathi yakho yokuzalwa kweenkwenkwezi
ukunyusa i-36 (Concerta 36 mg)
Ngokukhawuleza Bala ikhonkco eliDibeneyo usebenzisa iTheorem esisiseko
U100 (Ubrelvy 100 mg)
Indlela yokuzoba izandla kuMfanekiso weFashoni
Iziseko zeNkqubo ePheleleyo eC
UKeto Amino Forte
Uyenza njani into yoLawulo lweSpinner kwiJava
Uhlobo lwe-2 yeswekile
ithatha ixesha elingakanani i-2mg ye-suboxone
10 ml ukuya kwi-tsp
Iibutrans 10 mcg patch
Iziphumo zecala le-effexor xr
ukutya okungabangeli igesi